Video:-Madaxweyne Gaas oo si xoog leh u naqdiyay qadiyada Somaliland fariin adagna udiray – Idil News
Video:-Madaxweyne Gaas oo si xoog leh u naqdiyay qadiyada Somaliland fariin adagna udiray
Posted By: Idil News Staff July 19, 2018
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlayay xalay qaar kamid ah Jaaliyaddaha Puntland ee Qaaradda Yurub oo shir ku qabsaday magaalada Brussels ayaa si aad ah uga hadlay xaaladda gobalka Sool iyo dagaalka looga xoraynayo Soomaaliland.
Gaas ayaa caddeeyey in ay ka go`an tahay soo celinta Sool, oo aan ku soo laabaneyn hadalo, ciidamo iyo deeqo la aruursho, balse kusoo laabanaysa talaabo la qaado iyo ilaahay oo lagu kalsoonaado, maadaama uu sheegay in weerar lagu soo qaaday dhankooda.
”Wax la yiraahdo Somaliland majirto,dhul Somaliyed oo ingiriisku ku maysan jiray ayaa jira,sidoo kale Lixdan-kii Calanka la saaray ma ahayn midka hada ay haystaan mahan ee waakaa Buluuga ah,Cabdullaahi Suldaan Timacade oo isaaq ah ayuu ahaa Ninkii lahaa Sareeyoow ma nusqaamoow kana siin kana saar”ayuu yiri madaxweyne Gaas.
”Sheegida iyo buunbuuninta magca Somaliland waxa kaliya ee laga faa’ido waa sadex arimood oo kala ah”,ayuu yiri ‘Madaxweyne Gaas.
2.Somaliland is mahdisa.
3.Dadka reer Waqooyi oo la jahwareeriyo.
‘Wada hadalada Somalilland iyo Somaliya wax kasoo baxaya majiraan hadaan idin sheegaya,sababtana aan iidn raaciyo. Masuul Somaliya oo Madaxweyne ama ra’isalwasaare ah oo ku dhaca in uu yiraahdo ha iska tagto Somaliland majiro,sidoo kale ina Kaahin iyo Muuse Biixi kuma dhacaan in ay yirahadaan hargaysa Xamar baan ku daraynaa,marka maxaa laysku daalinyaa meesha xaqiiqdu waa intaase”,ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
”Hadaanba tooda uraacno oo ogolaano magaca Somaliland iyo in ay go’aan oo doodooda ah waaa nala laayay oo nala dulmiyay aan aqbalno,maxay iyaguna u diidayaan in Dhulbahante iyo Warsangeli ay diidaan gooni goosadka oo siday xor u yihiin iyaguna xor unoqdaan oo uga sii go’aan meeshay rabaana aadaan”,ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
”Axmed Siciid Samatar waxuu rabaa in uu sameeyo taariikh been abuur ah oo hada la yag-yagayo,maalin dhawayd isagoo 50-Riyood oo gees jaban wada ayuu furinta dagaalka yimid,saasuu rabaa in uu muuse kaga helo Wasiirka arimaha Dibada ee maamulkiisa”ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Si dhab ah ayuu noogu fasiray waxa uu yahay Axmed Siciid samatar,sidoo kale hadalkii ku haboonaa ayuu ku riday Madaxweyne Gaas.
”Cali Khaliif wax ka sheeg maleh,sababtoo ah qofku markuu jiran yahay waa loo duceeyaa ee lama maago,cali rabi ha caafiyo xanuun xun baa haya ,kaasoo ah midka ku jeclaysiiya qofka ku dhiba badanaana Dumarkuu ku dhacaa raga kuma dhaco”ayuu yiri Madaxweyne Gaas.Hoos ka daawo muuqaalka oo faahfaahsan